Fabrizio Romano: 'Arsenal Waxa Ay Xiiseyneysaa Tariq Lamptey'
Home Horyaalka Ingiriiska Fabrizio Romano: ‘Arsenal Waxa Ay Xiiseyneysaa Tariq Lamptey’
Arsenal ayaa xiiseyneysa saxiixa daafaca Brighton & Hove Albion Tariq Lamptey inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan, sida uu sheegayo saxafiga reer Talyaani ee Fabrizio Romano .
20 jirkaan ayaa dhaawac muruqa ah ku seegay qeyb ka mid ah xilli ciyaareedkii 2020-21 laakiin waxa uu xilli ciyaareedka ku bilaabay qaab ciyaareed cajiib ah, isagoo dhaliyay hal gool iyo seddex caawin 11 kulan oo Premier League ah.
Ciyaaryahankii hore ee Chelsea ayaa qandaraas kula jira garoonka Amex Stadium ilaa June 2025, laakiin sida laga soo xigtay Romano, Arsenal ayaa ka fiirsaneysa xiddiga heerka caalami ee England ee U21 inay u doortaan daafaca midig, iyadoo Hector Bellerin laga yaabo inuu ka tago kooxda suuqa soo socda.
“Waxaa hubaal ah, xagaaga soo socda, waxa dhici kara wax weyn. Arsenal ayaa isha ku heysa isaga sida ay u geyso daafaca midig.” Romano ayaa u sheegayGo Podcast .
“Wali ma jiraan wax horumarsan, wali ma jiraan wax la saxiixay. Ma jiraan wax culus wali, laakiin waxay fiirinayaan isaga, wuxuu ku jiraa liiska, waxaa loo arkaa inuu yahay ciyaaryahan xiiso leh, sidaas darteed Arsenal ayaa go’aansan doonta mustaqbalka soo socda.”
Lamptey ayaa laga yaabaa inuu ku lug yeesho kulanka soo socda ee Brighton ee Premier League ee ay la leeyihiin Leicester City 6 da Maarso.
Previous articleQaar kamid ah garoomada kooxaha ingiriiska oo lagu ciyaari doono Tartanka Euro 2020 oo shaaca laga qaaday.
Next articleManchester United oo isha ku heysa midkood Lautaro Martinez, ama Milan Skriniar